मानसिक रोग सुन्नु भएको छ ? अब यसबारे सम्पुर्ण जानकारी पढ्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
नेपालमा एक दिनमा औसत १६ जनाले आत्महत्या गर्छन् । यसरी हेर्ने हो भने तपाईले यो पढेको दिनमा पनि लगभग १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यसरी आत्महत्या गर्नेहरुको मुख्य कारण मानसिक समस्या नै हुने गर्छ । यसबारे सकेसम जानकारी पढ्नु र सेयर गर्नु जरुरी छ ।
यो लेख डा आशिष दत्त जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हुन्, उनीसँग छलफल गरेर सञ्जिब बगालेले तयार पारेका हुन् । यो लेख सेतोपाटी डट कममा प्रकाशित छ ।
पश्चाताप हुने, बिना कारणले सानो–सानो कुरामा पनि पश्चताप हुने हुन्छ। निन्द्रा नहुने, खाना नरुच्ने, बोल्न मन नलाग्ने, मन खुसी नहुने, पहिला आफूलाई जे कुरामा खुसी र आनन्द लाग्थ्यो त्यो नहुने, टाउको दुख्ने, मुटु काम्ने, एक्लै बसेर रुन मन लाग्ने
डिप्रेशन भइसकेपछि यसलाई उपचार गरी छोड्यो भने ६ महिनादेखि १३ महिनासम्म ठीक हुन्छ। तर, उपचार नगरी बस्यो भने लक्षण बढ्दै–बढ्दै जान्छ। डिप्रेशनको रोगी यस्तो बिन्दुमा पुग्छ उसले हरेस खान बाहेक केही काम गर्न नसक्ने हुन्छ।
मानिसका अधिकांश रोगहरू गलत जीवनशैलीका कारण पैदा हुन्छन्। डिप्रेसन पनि एक यस्तै रोग हो। त्यसैले डिप्रेसनबाट बच्न दिनहुँ ध्यान, प्राणायाम तथा योगासन वा शारीरिक व्यायामहरू गर्नुहोस्, सात्विक भोजन गर्नुहोस्, सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, चिन्ता होइन कि चिन्तन गर्नुहोस्। जीवनको बाटोमा आइलाग्ने समस्याहरूलाई एक—एक गरेर समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। मूलो कुरा जीवनको एउटा महान् लक्ष्य बनाउनुहोस्। त्यो किनभने ‘लक्ष्य’ भनेको जीवनको आधार हो।
त्यसैले त मार्टिन लुथर किंग, जुनियरले एउटा अति नै मनोवैज्ञानिक उद्गार व्यक्त भनेका छन्– यदि मानिसले आफ्नो जीवनमा कुनै महान् उद्देश्यका लागि मरिमेट्ने संकल्प गर्दैन भने उसको जीवन नै बेकार हुन्छ। यहाँ मननयोग्य कुरा के भने मानिसलाई आफ्नो जीवन बेकार लाग्न थाल्यो भने नै डिप्रेसनले आक्रमण गर्छ।
Don't Miss it छालालाई गोरो बनाउँन घरैमा के के उपाय अपनाउँन सकिन्छ ?
Up Next लक्षणहरु देखा परिसकेपछि उपचारै हुन नसक्ने रोग हो रेविज, कसरी बच्न सकिन्छ ? सम्पुर्ण जानकारी